Medical Writings ဆေးပညာစာများ: TB အသစ်လား အဟောင်းလား
(တီဘီ) ဖြစ်နေတာ အသစ်လား၊ အဟောင်းလား
Sat, May 26, 2012 at 1:10 PM
(တီဘီ) ရောဂါဟာ ဆရာဝန်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း ၆ လ ဆေးသောက်ပြီးပါပြီ။ အဲဒီ ၆ လ အတွင်းမှာလဲ ပုံမှန်ဆေးသောက်၊ စမ်းသပ်မှုကိုလဲ ခံယူခဲ့ပါတယ်။ ၆ လကျော်သွားတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခြားနေရာ ရောက်နေလို့ ပြန်ပြီး မစမ်းသပ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုဆို ၂ နှစ်နီးပါး ရှိနေပါပြီ။ လူကတော့ ကျန်းကျန်းမာမာ ဝဝဖြိုးဖြိုးပါပဲ။ အခု တစ်ခြားနေရာမှာ ဆေးစစ်တာ ဆရာဝန်က (တီဘီ) ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဓါတ်မှန်မှာပဲ တွေ့တာပါ။ သွေးမှာ အောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သိချင်တာက (တီဘီ) ဖြစ်ဘူးတဲ့လူဟာ ဆေးစစ်တိုင်း ကျနေမှာလား။ ဆေး ၆ လ မှန်မှန်သောက်ရုံနဲ့ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီလား သိချင်ပါတယ်။
• (တီဘီ) ရောဂါ မရှိသူ၊ ရှိနေသူ၊ ကုသပြီးသူ၊ ပြန်ဖြစ်သူ၊ ကုသလို့ မပျောက်သေးသူ ဆိုပြီး ခွဲပြောကြတယ်။ ဆေးစာနဲ့ ဆိုရင် Active tuberculosis (TB) လတ်တလော ရောဂါဖြစ်နေသူ၊ Inactive TB ရောဂါဟောင်း ရှိထားသူ၊ Extra-pulmonary TB အဆုပ်မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်နေသူ၊ Latent TB ရောဂါငုပ်နေသူ ဆိုပြီး သတ်မှတ်တယ်။
• အဆုပ် (တီဘီ) ရောဂါကို ဓါတ်မှန်နဲ့ စစ်တယ်။ သလိပ်လည်း စစ်မယ်။ အရေပြားကို ဆေးထိုးပြီးလည်း စစ်ပါတယ်။ အဖြေက တမျိုးထဲမှာပြမယ်။ နှစ်မျိုးမှာပြမယ်။ သုံးမျိုးလုံးမှာ ပြနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• (တီဘီ) ဆေးကို တမျိုးမကပေးရတယ်။ အများဆုံး သုံးနေတဲ့ ဆေးအတွဲကတော့ Rifampin + Ethambutol + Pyrazinamide + Isoniazid (INH) ဖြစ်တယ်။ ၆ လ ပေးတာ နဲ့ ၉ လအထိပေးတာ ရှိတယ်။
• Drug regimens ဆေးအတွဲ၊ Dose ဆေးအဆ နဲ့ Course ဆေးကို ဘယ်လောက် ကြာကြာ ပေးမလဲဆိုတာ နေရာတခုနဲ့ တခု၊ လူနာတယောက်နဲ့ တယောက်မှာ မတူပါ။ ပေးကာစမှာ တမျိုး လုပ်ထားရာကနေ ဆေးပါတ်မပြီးခင် ပြောင်းရတာလဲ ရှိတယ်။
• ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေ တကမ္ဘာလုံးကိုခြုံပြီး လမ်းညွှန်ချက်ထုတ်ထားတယ်။ တိုင်းပြည်တခုမှာလဲ သူ့တိုင်းပြည် အခြေအနေအလိုက် လမ်းညွှန်ချက် သပ်သပ်ရှိမယ်။ ဆေးပေးနည်း-ဆေးရောနည်းသာမက ဓါတ်ခွဲခန်းနဲ့ ဓါတ်မှန် အထူးကု-ဆရာဝန်တွေလဲ မတူကြတာ ရှိနိုင်တယ်။
ဓါတ်မှန်ဆိုတာ အဖြူနဲ့ အမဲသာမြင်ရတယ်။ “အရိုး” ဆိုရင်ဖြူပြီး “လေ” ဆိုရင်မဲတယ်။ ကြားကျတာလဲ ရှိတယ်။ ဥပမာ အသဲ၊ နှလုံး။ (တီဘီ) အတွက် Posterior-anterior (PA) chest X-ray ဓါတ်မှန်ရိုက်နည်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်။ တခြားနည်း Lateral ဘေးတိုက်ရိုက်နည်း နဲ့ CT scans (စကင်) တွေလဲ လိုရင်လုပ်မယ်။ ဆေးဝေါဟာရတွေကို ခေါင်းအရှုတ်မခံပါနဲ့၊ ထည့်တော့ ရေးပါရစေ။
• လူက ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ Tuberculin skin test အရေပြား စမ်းသပ်တော့ အပေါင်းပြနေသူတွေကိုသာ အဆုပ် (တီဘီ) ရှိ-မရှိ သေခြာသိအောင် ဓါတ်မှန် ရိုက်ရမယ်။ ဓါတ်မှန်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တိုင်း (တီဘီ) လို့ ပြောမရသေးပါ။
• Active pulmonary TB လောလောလတ်လတ် ဖြစ်နေတဲ့ (တီဘီ) ဆိုရင် Infiltrates or Consolidations တိုးပွါးလာတာ၊ အစိုင်အခဲလို့ခေါ်တာ မြင်ရမယ်။ ဒါတွေက အဆုပ်ရဲ့ အထက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာ များတယ်။ Cavities အခေါင်း ရှိချင် ရှိမယ်။ မရှိချင် မရှိဘူး။ Mediastinal or hilar lymphadenopathy အဆုပ် နှစ်ခုကြားနေရာနဲ့ အဆုပ် အဝင်နေရာတွေမှာ တက်စေ့ကြီးနေတာ ရှိချင် ရှိမယ်။ မရှိချင် မရှိဘူး။
• Old healed TB ပျောက်သွားပြီးသား (တီဘီ) ဆိုရင် များသောအားဖြင့် Pulmonary nodules အဆုပ် အစိုင်အခဲတွေကို Hilar area အဆုပ်အဝင်နေရာမှာ နဲ့ Upper lobes အဆုပ်အပေါ်ခန်းမှာ မြင်ရမယ်။ Fibrotic scars အမာရွတ် နဲ့ Volume loss အဆုပ်ထုထည် သေးသွားတာ ရှိချင် ရှိမယ်။ မရှိချင် မရှိဘူး။ Bronchiectasis လေပြွန်ကျယ်-ထူနေတာ နဲ့ Pleural scarring အဆုပ်အဖုံးလွှာ ထူနေတာလဲ ရှိချင် ရှိမယ်။ မရှိချင် မရှိဘူး။ Nodules အစိုင်အခဲတွေ နဲ့ Fibrotic scars အမာရွတ်တွေထဲမှာ တဖြေးဖြေးချင်း ပွါးများလာနေမဲ့ Tubercle bacilli ဗက်တီးရီးယားတွေ ရှိနေနိုင်တယ်။ ဒီအကောင်တွေကနေ နောက်ထပ် Active tuberculosis (တီဘီ) ရောဂါ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• Positive tuberculin skin test အရေပြားစမ်းသပ်တော့ အပေါင်းပြတာရှိနေရင် အသက်ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ် Latent infection (တီဘီ) ငုပ်နေသူအနေနဲ့ ဆေးကုသင့်တယ်။ ဆေးတမျိုးထဲပေးကုသတာ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ Calcified nodular lesions (Calcified granuloma) ထုံးဓါတ်ဖြစ်စဉ် ရှိနေသူတွေက အဲလိုဖြစ်လာဘို့ အခွင့်အလမ်းနည်းတယ်။
Exams and Tests စမ်းသပ်-စစ်ဆေးနည်းများ
(၁) Diagnosing active TB in the lungs လောလောလတ်လတ် အဆုပ် (တီဘီ) ကို စမ်းသပ်-စစ်ဆေးနည်းများ
• Medical history ရောဂါ ရာဇဝင်၊ Physical exam အထွေထွေစမ်းသပ်ခြင်း၊ Symptoms ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ Cough ချောင်းဆိုး၊ Fatigue အားယုတ်၊ Fever ကိုယ်ပူ၊ Night sweats ညချွေးထွက်။
• Sputum culture သလိပ်စစ်ခြင်း၊ ၁-ဂ ပါတ်အထိကြာနိုင်တယ်။
(၂) Diagnosing latent TB in the lungs ငုပ်နေတဲ့ (တီဘီ) ကို စမ်းသပ်-စစ်ဆေးနည်း
• တကယ်လို့ (တီဘီ) ပိုးဝင်တာခံရဘူးရင် Tuberculin skin test အရေပြားစမ်းတာမှာ အပေါင်းပြမယ်။
(၃) Diagnosing TB outside the lungs အဆုပ်မှာ မဟုတ်တဲ့ တခြားနေရာ (တီဘီ) ရောဂါ စစ်ဆေးနည်း
• Urine culture ဆီးကို ပိုးမွေးစစ်ဆေးနည်း၊ ကျောက်ကပ် (တီဘီ) ကိုသိနိုင်တယ်။
• Cerebrospinal fluid test ခါးရိုးထဲက စုပ်ထုတ်ယူတဲ့အရည်ကို စစ်ဆေးရင် (တီဘီ) ပိုးကြောင့် ဦးနှောက်မှေး ရောင်တာကို သိမယ်။
• CT scan (စကင်) လုပ်ရင် တကိုယ်လုံးပြန့်နေမဲ့ (တီဘီ) ကိုသိမယ်။
• MRI ရိုက်ရင် ဦးနှောက်နဲ့ ခါးရိုးကြော (တီဘီ) ကိုသိမယ်။
(၄) Tests during TB treatment (တီဘီ) ဆေးကုသနေတုံး စစ်ဆေးနည်း
(၅) (တီဘီ)ဆေးကြောင့် တခြားနေရာတွေကို ထိခိုက်နေ-မနေသိဘို့ -
• Liver function tests အသဲလုပ်ငန်းသိအောင် သွေးစစ်မယ်။
• Eye tests မျက်စိစစ်တာကို Ethambutol ဆေးပေးနေသူတွေကို လုပ်မယ်။
• Hearing tests နားစစ်တာကို Streptomycin ဆေးထိုးပေးနေသူကို စစ်တယ်။
(တီဘီ) ရောဂါကို တိကျသေခြာမှုရှိအောင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကနေ သူ့တိုင်းပြည်ထဲကိုလာရောက် အခြေချ နေထိုင်မဲ့သူတွေကို တိုင်းပြည်ထဲ ဝင်မလာခင် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအတွက် ဆေးစစ်မှုတွေ တိတိကျကျ၊ မလွဲမသွေလုပ်ဘို့ (တီဘီ) အတွက် ပြဌာန်းချက် လုပ်ထားတာကို ကိုးကားနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မှန်ရိုက် စစ်ဆေးခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များလို့ ခေါ်တယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ အသိအမှတ်ပြုပေးထားတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဆရာဝန်ပေါင်း ၄ဝဝ နီးပါးကိုသာ စစ်ဆေးခွင့် ပြုထားပြီး၊ သူ့တိုင်းပြည်ထဲမှာတော့ ဆရာဝန်ပေါင်း ၃ဝဝဝ လောက် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Active tuberculosis လောလောလတ်လတ် (တီဘီ) ရှိနေ-မနေကို စစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Chest X-ray ရင်ပတ်-ဓါတ်မှန် ရိုက်ပြီး၊ Classification worksheet ဆေးစာရွက်မှာ အဆင့်တွေ သတ်မှတ်ပေးထားပါမယ်။ တချို့ကို ချက်ချင်း ဆေးကုသဘို့နဲ့ တချို့ကို အခြေချနေထိုင်ပြီးနောက် ဆေးကုသပေးဘို့ ပါဝင်ပါတယ်။
(၁) Active TB လောလောလတ်လတ် (တီဘီ) ရှိနေတဲ့သူရဲ့ ဓါတ်မှန်ဆိုတာ -
7. Other တခြားတွေ့ရှိချက်တွေ။ ပျံ့နေတဲ့ (တီဘီ) Miliary TB ဆိုတာ အစိုင်အခဲ-အသီးငယ်လေးတွေ အများကြီး 1-2 mm လောက် အဆုပ်အနှံ့မှာ ရှိနေမယ်။
သတိထားဘို့က (တီဘီ) ရောဂါကို ဓါတ်မှန် တခါတည်း ရိုက်တာနဲ့ မလုံလောက်ပါ။ လိုမယ်ထင်ရင် Sputum smears သလိပ်စစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ဓါတ်မှန်မှာ အောက်က အချက်တွေ ရှိမနေပေမဲ့
(၂) Inactive TB အရင် (တီဘီ) ဖြစ်ဘူးထားသူ၊ လောလောဆယ် ရောဂါမရှိသူ
2. Discrete nodule(s) without calcification ဆိုတာ Nodular densities အစိုင်အခဲလိုစုဝေးမှု တခုဖြစ်ဖြစ် အများကြီးဖြစ်ဖြစ် ရှိနေမယ်။ Distinct borders နယ်နိမိတ်သပ်သပ်ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေးမှာ Airspace opacification လေပိတ်နေတဲ့သဘော မရှိရဘူး။ Nodules အစိုင်အခဲလေးတွေက လုံးဝိုင်းနေမယ်။ Infiltrates ပွါးတိုးလာမှုမျိုး နဲ့ Airspace opacities လေပိတ်နေတဲ့သဘောနဲ့ ခြားနာတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ Non-calcified ဒီအစိုင်အခဲလေးတွေဟာ ထုံးဓါတ်ဖြစ်စဉ် မရှိဘူး။ ထုံးဓါတ်ဖြစ်စဉ် ရှိနေရင် အတန်းအစား ခြားနားပြီ။ OTHER X-ray findings, No follow-up needed တခြားဓါတ်မှန် တွေ့ရှိချက်များ ဆက်လက်ကုသဘို့ မလိုသူများစာရင်းထဲ ရောက်သွားမယ်။
3. Discrete fibrotic scar with volume loss or retraction ဆိုတာ အဆုပ်အပေါ်ပိုင်းမှာ မျဉ်းကြောင်းလိုက် အမာရွတ်အစိုင်အခဲ ခပ်ဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်။ အဆုပ်အပေါ်ပိုင်းမှာ နေရာကျဉ်းနေမယ်။ ဒါနဲ့အတူ Upward deviation of the fissure or hilum အဆုပ်အစိတ်အပိုင်းတွေကြားလွှာနဲ့ အဆုပ်အဝ (အဝင်) နေရာတွေက အထက်ဆီ တက်နေမယ်။ အဆုပ် ဘယ်နဲ့ ညာ မတူဖြစ်နေမယ်။
4. Discrete nodule(s) with volume loss or retraction ဆိုတာ Distinct borders အနား သတ်သတ် မှတ်မှတ်ရှိတဲ့ nodular densities အစိုင်အခဲ လေးတွေ တခု ဒါမှမဟုတ် အများဟာ ဘေးမှာ Airspace opacification လေနေရာ ပိတ်နေတာ မရှိဘူး။ Reduction အဆုပ်အပေါ်ပိုင်းမှာ နေရာကျဉ်းနေတာ မရှိရဘူး။ Nodules အစိုင်အခဲလေးတွေဟာ Round လုံးဝန်းနေမယ်။ Rounded edges အနားသတ်လဲ တုံးနေမယ်။
5. Other တခြားတွေ့ရှိချက်တွေဆိုတာ Bronchiectasis ခေါ်တဲ့ လေပြွန်ကြီးတွေ ကျယ်နေတာနဲ့ နံရံတွေ ထူနေတာ။
(၃) Other Chest X-Ray Findings တခြားဓါတ်မှန် တွေ့ရှိချက်များ
(က) Follow-up needed ဆက်လက်ကုသဘို့ လိုသူတွေ
3. Pulmonary abnormalities အဆုပ်ထဲမှာ (တီဘီ) မဟုတ်တာ ဥပမာ အကျိတ် တွေ့တာ။
4. Other အဲဒါတွေ မဟုတ်ဘဲ ဆေးကုသဘို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆရာဝန်ကသတ်မှတ်တာ။
(ခ) No follow-up needed ဆက်လက်ကုသဘို့ မလိုသူတွေ
3. Blunting of costophrenic angle နံရိုးနဲ့ (ဒိုင်ယာဖရမ်) ဒေါင့်ချွန်က (ချွန်ရမဲ့အစား) တုံးနေတာ။ တဖက်ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်ဖြစ်၊ လူကြီးမှာဖြစ်နေတာ။ ကလေးမှာဆိုရင် ဒီလိုဖြစ်တာက လောလောလတ်လတ် (တီဘီ) လို့ သတ်မှတ်တယ်။ တကယ်လို့ ဒေါင့်ချွန် တုံးနေတာသာမကဘဲ Large pleural effusion အရည်တွေ များများ အောင်းနေတာပါရှိရင် လူကြီးရော ကလေးပါ လောလောလတ်လတ် (တီဘီ) ဖြစ်နိုင်တယ်။
4. Solitary calcified nodules or granuloma ထုံးဓါတ်အစုအဝေ သန့်သန့်လေးဖြစ်ဖြစ် Calcified lymph node တက်စေ့မှာ ထုံးဓါတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ဖြစ် Lungs အဆုပ်ထဲ၊ Hila အဆုပ်အဝ၊ Mediastinum အဆုပ်ကြား နေရာတွေမှာ ရှိနေတာ။ အနားသားက ထက်နေမယ်။ သိသာမယ်။ သပ်သပ်မှတ်မှတ်ရှိနေမယ်။ ဒါမျိုးကို Class B3 ခေါ်တယ်။ TB in the past အတိတ်ကာလ (တီဘီ) ခေါ်တယ်။
မေးတဲ့သူလို စနစ်တကျ ကုသတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာ-ဝဖြိုးလာတာပါ။ (တီဘီ) ရောဂါဟာ သက်သာလာတာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာမယ်။ အသားအရေ ညိုတိုတို ဖြစ်လာမယ်။ ဆေးတွေကြောင့်ပါ။ ဆေးတွေ ရပ်ချိန်ကျလို့ ရပ်လိုက်တဲ့နောက်မှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ အသားအရေ နဂိုအနေ စိုပြေလာမယ်။ ဆရာဝန်အချင်ချင်း အပြစ်ပြောရာတော့ ကျချင်ကျနေမယ်။ ဓါတ်မှန်တချပ်တည်းနဲ့တော့ အကဲဖြတ်လို့ မရသေးပါ။ Active TB အခုဖြစ်နေတဲ့ (တီဘီ) လား၊ Old TB ကုသထားလို့ ပျောက်နေတဲ့ အမာရွတ်ထင်နေတာလားလို့ ခွဲခြားနိုင်အောင် တခြား စမ်းသပ်မှုတွေ လိုသလို အတွေ့အကြုံလဲ လိုပါတယ်။ ဒုတိယအကြံဥာဏ်လိုတယ်။ အဟောင်းတိုင်း မကောင်းဘူထင်တာ မမှန်ပါ။